कान्ति बाल अस्पतालको ब्लड बैंक सेवा पुनः सुचारु गर्न सम्झौता | Makalukhabar.com
माघ ६, काठमाडौँ । कान्ति बाल अस्पतालको निस्क्रिय अवस्थामा रहेको ब्लड बैंक सेवालाई पुनः सुचारु गरी सञ्चालनमा ल्याउन राउन्ड टेबल नेपाल र कान्ति बाल अस्पताल बीच सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झैता अनुरुप काठमान्डौं जिल राउन्ड टेबल २२ (राउन्ड टेबल नेपालको अंश) ले ६ जना स्वयसेवकलाई लाग्ने खर्च ब्यहोर्ने गरी उक्त सेवा पुनः सञ्चालन गरिन छ।
रगतको सहज उपलब्धता अस्पतालको सेवा लिन आउने लाखौं बच्चाहरुकालागि महत्वपूर्ण बिषय भएकाले राउन्ड टेबल नेपालको यस कार्यले भविष्यमा नेपाली सर्वसाधरण र खास गरी बच्चाहरुलाई हित गर्ने विश्वास लिईएको छ। यसका साथ साथै राउन्ड टेबल नेपालले अस्पतलाई थप सहयोग पुग्ने गरी नियमित रक्तदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ।
गत अक्टोबर २०१९ मा पुन सञ्चालनमा ल्याईएको यस ब्लड बैंकले आज सम्म करिब दशौं हजार बालबालिकाहरुको हित गरेको छ र आउँदा दिनहरुमा यसले निरन्तर सेवा पुर्याउने बताइएकाे छ ।
राउन्ड टेबल नेपाल बाल बालिकाहरुको बृहत्तर हित, राम्रो शिक्षा र स्वस्थ जस्ता महत्वपूर्ण बिषयमा सेवा पुर्याउने उद्देश्य बोकेको समाज सेवामा समर्पित युवाहरुको समुह हो।
चैत्र २३, कैलाली । धनगढीका कोरोना संक्रमित ३४ वर्षीय युवकको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ देखिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण देखिएपछि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत युवकको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ देखिएको हो । सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा. जगदिश जोशीले उनको दोस्रो रिप... जारी राख्नुहोस...
वाशिङटन डिसी । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका चारजना नेपालीको शनिबार कोरोनाका कारण निधन भएको छ । यस अगाडि ५० वर्षीय अनिल लिम्बूको निधन भएको थियो । योसँगै अमेरिकामा कोरोनाका कारण निधन हुनेको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ ।शनिबार अरू चारजनाको निधन भएको हो । यसरी निधन हुनेमा ४० वर्षीय सोनाम लामा, ४८ वर्षीय थोक्मे... जारी राख्नुहोस...
डा. रवीन्द्र पाण्डेचैत्र २३, काठमाडौं । चीनले हिजो सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण बिरुद्धको खोप लगाएको छ । उनीहरुको परिणाम हेरेर तुरुन्तै अरबौंको संख्यामा खोप वितरण गर्ने जनाएको छ ।अमेरिका पनि यो खोप परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंगापुर, इजरायल, नेदरल्याण्ड, क्यानाडा, जापान लगायतक... जारी राख्नुहोस...
धरान उपमहानगरपालिकाले ल्यायो 'कोभिड-१९ धरान’ मोबाइल एप्लिकेशन
चैत्र २३, धरान । धरान उप महानगरपालिकाले ‘कोभिड-१९ धरान’ नामक मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । धरानका स्थानीय युवाहरुको समूह कोड आई टी, वि धराने प्रिमियर नेपालको प्राविधिक सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले ‘कोभिड-१९ धरान’ नामक एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो एप्लिकेशन धरान उपमहानगरपालिकाको वेबसाइटबा... जारी राख्नुहोस...
चैत्र २३, धरान । सरकारले आजसम्म १५२९ को कोरोना परीक्षण गरेको तथा ११३ जना आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिइरहँदा १ नं. प्रदेशको कोरोना ल्याब सेन्टर रहेको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि आजसम्ममा २२७ जनाको प्रारम्भिक जाँच गरेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानले आजसम्म ५० जनाको कोरोना नमुना परीक्षण गर... जारी राख्नुहोस...
चैत २३, चितवन । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण फैलन नदिन र जनतालाई सुरक्षित राख्न सरकारले ल्याएको क्वारेन्टाइन नाम मात्रैको भएको छ ।सरकारको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरुले सम्भावित जोखिम हुन नदिन आ–आफ्नो पालिकामा क्वारेन्टाइन बनाएका छन् तर त्यसको प्रयोग भएको छैन ।विदेशबाट आएकाहरु बस्न नमान्दा सर... जारी राख्नुहोस...
कोरोना परिक्षणका लागि मोबाइल एप्समा ८ हजार बढीले भरे फाराम, १५० जना रेड जोनमा !
चैत्र २३, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को आशंकामा आज (आइतबार) सम्ममा १ हजार ५ सय २९ जनाको परिक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १२... जारी राख्नुहोस...
दादुराबाट धादिङमा दुई बालकको मृत्यु
चैत्र २३, काठमाडौं । धादिङको चेपाङको बस्तीमा दादुरा–रुबेलाबाट दुई बालकको मृत्यु भएको छ ।डेढ महिनादेखि फैलिएको दादुरा–रुबेलाबाट बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–६ कि २९ महिने बालिका अनिसा चेपाङ र वडा–४ कि आठ महिने शिशु सुशान्त चेपाङको मृत्यु भएको हो ।अनिसाको चैत १७ र सुशान्तको चैत ११ मा मृत्यु भएको गाउँपालिक... जारी राख्नुहोस...
कोरोना कहर : अब कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङमा र्‍यापिड टेस्ट
चैत २३, काठमाडौं । कोरोनाको जोखिम बढी देखिएपछि कैलाली, कञ्‍चनपुर र बागलुङमा र्‍यापिड टेस्टको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । सरकारले थप व्यक्ति संक्रमित नहुन भनी ती जिल्लामा छिटो विधिबाट सम्भाव्य व्यक्तिको -यापिड टेष्टको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । तीन जिल्लामा र्‍यापिड टेस्ट गर्ने र कोभि... जारी राख्नुहोस...